Red100 na Guangzhou International Lighting Fair, affordab ...
A ga -eme ihe ngosi ọkụ ọkụ mba ụwa iri abụọ na isii nke Guangzhou na 2021 na Guangzhou Bubata na Mpụga Ọpụpụ na Ọpụpụ site na Ọgọst 3 ruo 6. Dịka onye nrụpụta ọkụ ọkụ ọkachamara ọkachamara na ngwaahịa ọkụ ọkụ, Red100 Lighting na -egosipụta ụzọ anọ nke ngwaahịa amamịghe: ezinụlọ, ind .. .
Nrụpụta mbụ na mbufe ụwa nke B ...
Na Julaị 22, 2021, RED100 Beacon smart bulbs bụ nke emepụtara nke ọma, ewegakwara Tuya nke mbụ nke Beacon smart bulb samples. Emere emume nnyefe nlele na RED100. Lin Tianzhun, onye isi njikwa Tuya Smart East China, nabatara akpa nke nlele na behal ...
Igwe ọkụ RED100 na -ewebata Ngwọta Igwe Ọdụdọ Ọhụrụ ...
Na Julaị 6th, ọkụ RED100-onye na-emepụta ọkụ na-ejikọ ụwa ọnụ nke dabere na China, kwupụtara na ọ wepụtara ụzọ dị ọnụ ala, dị mfe ijikọ smart bulb solution-Beacon Smart Bulb, mgbe Tuya smart ka bidoro ikpo ọkụ mgbede Satọdee gara aga. Julaị 3. N'ime afọ ...
N'okpuru ọgba aghara ụlọ ọrụ na -emekarị "ụkọ Chip", t ...
Edemede a na -ehota Tuya smart "N'okpuru ọgba aghara ụlọ ọrụ na -emekarị" ụkọ Chip ", azịza ya na -eme ka ọkụ ọkụ dị ọnụ ala! Kemgbe afọ gara aga, ụkọ mgbawa na ụlọ ọrụ semiconductor akpata ọgba aghara dị iche iche nke ụlọ ọrụ, dị ka mmepụta ụgbọ ala kwụsịtụrụ ...
Red100 na Tuya Smart bịanyere aka na atụmatụ imekọ ihe ọnụ!
Na Jenụwarị 22, Red100 na Tuya Smart mere emume ịbịanye aka na nkwekọrịta na isi ụlọ ọrụ Tuya Smart na Hangzhou. Lin Limin, onye isi oche Red100 Lighting kwuru, sị: “Ọkụ ọkụ zuru ụwa ọnụ abanyelarị n'oge mmepe ngwa ngwa. Dabere na nke a, anyị erutela ...
E wuchara ụlọ ọrụ RD ọhụrụ nke Red100, brin ...
N'ọnwa June 2018, etinyere ụlọ ọhụrụ R&D ụlọ ọrụ Red100 n'ọrụ. Ụlọ ọhụrụ ahụ na -ekpuchi mpaghara square mita 32,000, yana ngụkọta nke ala ise. Ọ nwere ụlọ ngosi ihe ngosi nwere ọgụgụ isi dị elu, ụlọ nyocha R&D LED, osisi mmepụta ọkọlọtọ LED, mmepụta ọhụrụ ...
Ọnọdụ nrụpụta dabere nke Red100 na -enyere aka ịbawanye ngwa ngwa ...
Red100, ewepụtara na ọkụ ọkụ dị elu n'ime afọ 23, na-enweta mmepe na-aga n'ihu. Ka ọ dị ugbu a, mbupụ ya ekpuchila ihe karịrị mba 60 gburugburu ụwa, ahịa ya abawanyela karịa 50% kwa afọ. Nke a karịrị ndị ọzọ na ụlọ ọrụ ọkụ ebe asọmpi na -abawanye ...
Red100 CFL na -apụ apụ, tinye ọkụ smart ...
N'April 1, 2019, n'elekere 17:20 nke abalị, Maazị Lin Limin, onye isi oche Red100, kwupụtara n'ihu ọha na CFL na -apụ apụ, Red100 na -abanye n'ahịa ahịa ọkụ mara mma! Ihe na -esote bụ okwu zuru oke nke okwu a: Ezigbo ndị ọrụ ibe m, Ndewo onye ọ bụla! Taa bụ Eprel 1st, 2019. Maka anyị, toady bụ ụbọchị wort ...